Waalidiin bannaanbax ka dhigay Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
22 June 2021 Mid kamida qorshayaashii Farmaajo ee doorashada oo u hirgalay!
Waalidiin bannaanbax ka dhigay Gaalkacyo
Magaalada Gaalkacyo waxaa isugu soo baxay waalidiin ka cabaneysa caruurtoodii loo qaaday dalka Eratariya kuwaasoo aan war iyo wacaal loo heyn.
GAALKACYO, Soomaaliya - Waalidiin ka careysan caruur ay dhaleen oo tababar ciidan loogu qaaday dalka Eratariya ayaa isugu soo baxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaasoo waalidiinta ay kusoo bandhigeen dareenkooda ku aaddan walwalka ay ka qabaan caruurtooda.
Isku soobaxa lagu qabanayo magaalada Gaalkacyo ayaa noqonaya kii labaad ee ay waalidiintu isugu soo baxaan, waxaana uu yimid kaddib markii hay'adda Qaramada Midoobay xafiiskeeda arrimaha bani-aadannimada uu soo saaray warbuxin dheer oo ku saabsan dagaalladii ka dhacay dalka Itoobiya.
Waalidiinta ayaa ka dalbanaya dowladda Soomaaliya in caruurtooda ay lasoo hadashiiyaan, oo nolol iyo geeri midda ay ku sugan yihiin laga qanciyo. Isku soo baxa waalidiintan ayaa kusoo beegmaya maalin kaddib markii bannaanbax sidaan oo kale ah uu ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay arrintan, iyadoo beenisay in ay jiraan ciidan Soomaaliyeed oo loo qaaday dalka Itoobiya si ay uga qeyb qaataan dagaalkii gobolka Tigreega. Inkastoo hadalkaasi aysan ku qancin waalidiinta ubadkoodu ka maqan yihiin.
Mid kamida qorshayaashii Farmaajo ee doorashada oo u hirgalay!
Warar 22 June 2021 10:02
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo oo aad u doon-doonayay inuu saameyn ku yeesho doorashada Jubbaland ayaa ku guuleystay mid kamida qorshayaashiisii!
Dilal qorsheysan oo ka dhacay Muqdisho
Warar 22 June 2021 9:43